बिगार्न त जसले पनि सक्छ, सपार्ने पो नेता ! - Ujyaalo Nepal
By ujyaalo	 On १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०३:१० 30
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कसैलाई टेर्दिन भन्न नमिल्ने बताएका छन् । ट्वीट गर्दै भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलापछि निकास खोज्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै अतिले खती गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर म कसैलाई टेर्दिन,जानेको/सकेको गर भन्ने दम्भ/हठ प्रदर्शन गर्न मिल्दैन । हलो अड्काएर गोरू चुट्नु कुनै पौरख हैन । बिगार्न जसले पनि सक्छ; सपार्ने पो नेता ! अदालतको फैसलाले सबैलाई गम्भीर बनेर संकटमोचन गर्ने अवसर दिएको छ ! निकास खोज्ने मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो । अतिले खति गर्छ !’
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०३:१०